လေနုအေး: မြို့ ပြနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်
Posted by တန်ခူး at 11:58 AM
သားသားလေးနေမကောင်းဖြစ်နေတာ မသိဘူး အမတန်ခူးရေ။ ဘလော့ဂ်ကို မရောက်ဖြစ်လို့ပါ။ အခုအတော်သက်သာလာပီဆိုတော့ ၀မ်းသာစရာပါ။ အမတန်ခူးသားလေး အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေနော်။
ဟုတ်ပနော်- ကျမတို့ငယ်ငယ်က..ဖုန်ထဲသဲထဲ..ဆော့စမ်း။ မိုးထဲရေထဲ ဆင်းစမ်း။ ဘာမှ ပူစရာမရှိခဲ့ဘူး။ ပိုးတွေ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ..ဘက်တီးရီးယားတွေ..ပြီးလို့ အချင်းချင်း..သမ မျှတ နေ-နေကြတာပဲ။
သားသား ပြန်နေကောင်းသွားပေလို့။ ဘယ်လောက် စိုးရိမ်ပူပန်လိုက်မလဲဆိုတာ နားလည်ခံစားမိပါတယ်။
ကလေးဆိုတာ နုနုလေး။ ရောဂါတွေ ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ။ အမ စိတ်ကူးမျှော်လင့်သလို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာ ဆွေမျိုး တသိုက်နဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးကို အမြန်ဆုံး ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
သားသားရေ ဒီတောင်ကို ကျော်ပြီဟေ့ Cheers!
သားကလေး အမြန် ကျန်းမာလာပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ခုနကတင် ဒီပို့စ်ကို မမြင်လို့ ဖုန်းဆက်နေမိသေးတယ်။ ကလေးအိပ်နေလို့ ဖုန်းပိတ်ထားတယ်ထင်တယ်။
အမတန်ခူး.. သားလေး အမြန်နေကောင်းပြီး ပုံမှန်ဆော့ကစားနိုင်ပါစေ...
သားသား နေမကောင်းတာမသိဘူး တော်သေးတာပေါ့ သက်သာသွားလို့။ မြန်၂ကျန်းမာမာဖြစ်ပါစေ သားသားရေ့ =) အားတင်းထား ..။
that why when we back ygn, it is easy to sick coz our immue system is so weak. Also u can see here the water including chemical loosingalot of our hair fall.... Now compare with last decade my hair is less than half really......
မတန်ခူးရေ.. သားလေး နေပြန်ကောင်းလာပြီဆို တော်သေးတာပေါ့။ ကလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး စိတ်ညစ်ရတာ မိဘတွေပါပဲ... အမဘယ်လောက်ပူပန်နေရမလဲဆိုတာ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ နလန်ထလေး ဆော့နေပြီဆိုတော့ စိတ်အေးရတာပေါ့ အမရေ.. :)
သားလေး နေမကောင်းဖြစ်နေတာလား။ မြန်မြန်ပြန်နေကောင်းပါစေ..။ ကလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်ရင် သိပ်သနားဖို.ကောင်းတာပဲ...။ ကိုယ်သာ ဖြစ်လိုက်ချင်တော့တာပဲ...။ ကလေးလည်း မြန်မြန်နေကောင်း..တန်ခူးတို.လည်း စိတ်ပင်ပန်းတာတွေ သက်သာပါစေ...
ဟုတ်တယ်နော် လင်းလဲ ဟိုတလောက လက်ကြီးတခုလုံး ဘာမှလဲ မထိခိုက် ဘာကောင်မှလဲ မကိုက်ဘဲနဲ့ယောင်ကိုင်းလာတာ။ ဆ၇ာဝန်ပြတော့ Infection ၀င်တာတဲ့း( အဆန်းပဲရှင်လို့ သာ အော်လိုက်ချင်တယ်။
မတန်းခူးသားလေး မြန်မြန်နေကောင်းပြီး အရင်ကလို ပန်းချီတွေပြန်ဆွဲနိုင်ပါစေ။
တန်ခူးနဲ့ တန်ခူးရဲ့ မောင်လဲ ပူပန်သောကတွေ သက်သာရာ ရကြပါစေ...
ဟယ် အမသားလေးက ဆေးရုံတောင်တက်လိုက်ရတယ်လားးး အဲဒါကြောင့် အမပျောက်နေတာကိုးးး
အခုတော့ နာလန်ထလေး အတိုးချဆော့နေပီဆိုတော့ ကောင်းသွားပီပေါ့..
ဆော့ပါစေအမရယ်.. ကလေးဆိုတာ ဆော့မှ ကျန်းမာတာတဲ့..
ကလေးနေမကောင်းတုန်းခံစားနေရတဲ့ အမကို မြင်မိတယ်။ မဒီဒေဝီ ရဲ့ သောက လိုပဲလေ မျက်စိထဲမှာ ပြေးမြင်မိပါတယ်။
ကျနော်က ပို့ စ်အသစ်မတွေ့ တော့ မတန်ခူး နေမကောင်းဖြစ်တယ် ထင်နေတာ...
ကျနော့်က မမိုးခိုနဲ့ မတန်ခူး အသစ်မတင်ရင် နေမကောင်းဘူးဘဲ ထင်နေတော့တာ...။
လူကြီးတွေက ကိုယ်ခ့စားရတဲ့ ဝေဒနာကို ပြောပြတတ်တယ်...
ကလေးတွေက ပြန်မပြောတတ်ကြတော့ စိတ်ပူရတယ်... ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဗျာ..။
နေပြန်ကောင်းပြီး ဆော့နိုင်တယ်ဆိုမျ စိတ်အေးမိတာပါ...။
“ ဖေကြီး...ဒီဘက်လှည့်ပါဦး ခင်ဗျ...မေကြီး...
ဒီဘက်လှည့်ပါဦးခင်ဗျ” ဆိုတာလေးက စပြီး
သားလေး အမြဲ ကျမ္မာပါစေ...
မတန်ခူးတို့ မိသားစုလဲ သောကအပူ ကင်းဝေးပါစေ လို့ 
သားလေး နေပြန်ကောင်းလာလို့ ၀မ်းသာကြောင်း အရင်ပြောပါရစေ အမတန်ခူးရေ...။ ဘက်တီးရီးယားဆိုလို့ ကလေးမပြောနဲ့ လူကြီးဖြစ်တဲ့ ကျနော်တောင် တလောက ချောင်းတွေ အရမ်းဆိုးနေတာ ပထမတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့ပဲ ချောင်းဆိုးဆေးရည်လောက် သောက်နေတာ၊ ညသန်းခေါင် အိပ်မရအောင် သုံးလေးရက် ဆက်ဆိုးနေတော့မှ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြရတယ်။ ဆရာဝန်က နားကျပ်လေး ထောက် နားထောင်၊ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ နားပေါက်တွေထဲ ဓာတ်မီးသေးသေးလေးနဲ့ လိုက်ထိုးကြည့်...၊ ပြီးမှ မှတ်ချက်ချတာ...၊ ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် ချောင်းဆိုးသတဲ့...။ လူရွှင်တော်တွေ ပြောသလိုပဲ... ဆိုးဆိုးနိုင်လွန်းတဲ့ ချောင်း၊ ယားယားနိုင်လွန်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားလို့ သာ ဟစ်လိုက်ချင်တော့တယ်။
Wishing all your family to be healthy, wealthy, happy life...
သားက ဆေးရုံရောက်တဲ့ အထိတောင် နေမကောင်း ဖြစ်သွားတာကိုး။ ကလေးတွေ နေမကောင်း ဖြစ်ရင် သိပ်သနားဖို့ ကောင်းတယ်။ ဖိုးရွှေလိပ်ကလေး မြန်မြန် နေကောင်းပါစေ။
အမရေ .. သားသား ဆေးရုံတောင် တက်ရတယ် ဆိုတော့ တော်တော် လန့်သွားမှာနော်... ဘက်တီးရီးယား အဆန်းတွေက ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာလို့ အရင်ထက် အဆ ၄၀ ပိုများ လာပါမယ်တဲ့.. ပူလေ ပွားလေ၊ နေရာအနှံ့ ပြန့်လေပါတဲ့... အားတင်းဖို့သာ ပြင်ပေတော့ပေါ့ အမရေ.. ကလေး ပြန်အားရှိအောင် အစားအသောက် များများ စားခိုင်းပါနော့... ပြီးတော့ သားသား ဆော့ပါစေ.. ကလေးဆိုတာ ဆော့လေ သန်မာလေ တဲ့... မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပဲနော့ (ဟိ.. တကယ်က ကိုယ်ငယ်တုန်းကလဲ တအားကို ဆော့တာ။ အကျင့်တူချင်း အားပေးတာပါ)ကလေးတွေ စိတ်ပါလို့ ဆော့တာ အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွှေတံဆိပ်ကြီါ် မက်ပြီါ် ကိုယ်ဂုဏ်ယူချင်တိုင်း ကလေးကို နှိပ်စက်သလို အားကစား လုပ်ခိုင်းတာတော့ အားမပေးဘူး အမရယ်.. အမလဲ အဲလိုပဲ ခံယူတယ်ဟုတ်...
သတင်းမေး ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ နိနိရေ…
ကေရေ… အဲဒီမြို့ ပြရောဂါက မုန်းစရာလဲကောင်း ဈေးလဲအတော်ကြီးတယ်…ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်…
ဟုတ်တယ်သုရေ… ကိုယ်သာဖြစ်လိုက်ချင်တာပဲ… ကျေးဇူးပါ…
ချိုသင်းရေ… အဲဒီဆုတောင်းလေး အမြန်ပြည့်ချင်တယ်… ကျေးဇူးပါ…
ကိုပေါရေ… ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ကျေးဇူးပါကိုပီတိရေ… ခုတော့ မျောက်ပြန်ဖြစ်နေပြီလေ…
တို့ လဲ ဒီလိုပဲ ဖြိူးဖြိုးရေ… တနေ့ တနေ့ ကျွတ်လိုက်တဲ့ ဆံပင်… တခါတခါ ခေါင်းတုံးတုံးချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်… လာလည်တာ ကျေးဇူးပါနော်… နောင်လဲ လာလည်ပါဦး…
ဟုတ်ပါ့နုရေ… သူပြန်ဆော့မှ ကိုယ်လဲ စိတ်ချမ်းသာတယ်… ကျေးဇူးပါ…
မ ရေ…ဟုတ်တယ်နော်… ကိုယ်သာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်… ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ မရယ်…
လင်းရေ… ဂရုစိုက်ညီမရေ… တခါတလေ မြန်မာလိုဆို သွေးမှင်လေမှင် ဖြစ်တတ်တယ်… သွေးသားနဲ့ ဆိုင်တာပေါ့… အမလဲ ဟိုတလောက ခြေထောက်ကြီး ယောင်တာ… မီဂသီနဲ့ ပျောက်သွားတယ်… ကျေးဇူးပါ…
သက်ဝေရေ… … ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
အမှန်ပဲ မြတ်နိုးရေ… ထမင်းတောင် မစားနိုင်ဘူး… အပူတွေလေ… သူဆော့တာမြင်မှပဲ စိတ်ချမ်းသာတော့တယ်…
ပေါက်ရေ… ဒီက ရာသီဥတုက မပြောင်းပေမယ့် အမြဲစိုစွတ်နေတာ… ဗိုင်းရပ်စ်ပျော်တာပေါ့… ကျေးဇူးပါ…
ဟုတ်ပါ့ မမရေ… တော်သေးရဲ့…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ညာဘက်ထောင့်အပေါ်လေးမှာ သတင်းစကားဆို ရေးထားတတ်ပါတယ်… ပို့ စ်အသစ်မတင်နိုင်တောင် ဘာဖြစ်နေတယ် ဆိုတာလေးပေါ့… သတင်းမေး ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်…
သြော်… ကိုစေးထူးပျောက်နေတာ ဒါကြောင့်ကိုး… ဟုတ်တယ်ကိုစေးထူးရေ… ယားယားနိုင်လွန်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယား… ကျေးဇူးပါ...
ဆုတောင်းပေးတာ ကျေးဇူးပါ တီတီပုံရိပ်…
လှိုင်ရေ… အဆ ၄၀ တဲ့လား… နဲနဲနောနော မဟုတ်ဘူးနော်… သားကိုတော့ လိုအပ်တဲ့ အားဆေးတွေ တိုက်နေတာပဲညီမရေ… ဆော့တာကို အမလဲ အားပေးတယ်… ပြည်ကြီးတွေလိုတော့ ကလေးကို ဖိအားမပေးဘူးညီမရေ… စိတ်ချ… ကျေးဇူးပါ…
မြတ်နိုးရေ… ကလေးက နေကောင်းသွားပါပြီ… ကျေးဇူးနော်….
သားသားရေ့ နေကောင်းပြီဟုတ်...ဦးဦး အာဘွားပေးရင် လာနှုတ်ဆက်တယ်ဗျး) နေကောင်းစသတည်း......... အစ်မကြီး တာ့တာ့ အိုးပုတ်ပန်းတွေနဲ့ ပဲသွားဆော့တော့မလို့အစ်မမောင် ။
မောင်မျိုးရေ… သားသားလေးကလဲ သတိရနေပါတယ်… အိုးပုတ်ပန်းတွေ ကြားပျော်နေပြီလား…